I-Riverdale Villa Room 1, Kumarakom - I-Airbnb
I-Riverdale Villa Room 1, Kumarakom
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguJohnson
Ecaleni kwamasimi epaddy kunye neentende zekhokhonathi ezijingayo, omnye wemilambo yomlambo iMeenachil wenza uhambo lwakhe oluthe cwaka ukuya kumanzi angasemva eKumarakam. Kwaye kukho imfihlo enye egcinwe kakuhle yamava amanzi angasemva .... Riverdale Villa. Ikhaya elipholileyo elinamagumbi amabini okulala, ilanga elininzi kunye nokuqaqamba kokungena kulo, kwaye ngaphezulu kwayo yonke into umntu uqaliswa kumava onyango onyango kumanzi angasemva.
I-Riverdale Villa ibekwe eKaripputhatt, kwilali yaseAymanam, kwisithili saseKottayam eKerala. Ngumhlaba omncinci onamasimi epaddy ecaleni koMlambo iMeenachil. Idolophu ekufutshane yelali yiAymanam kwaye ichibi laseVembanadu likumgama nje wemizuzu engama-20 ukusuka apha ngemoto. Ilali yaseAymanam ithathele ingqalelo yababhali abaninzi abaziingcali. Umntu unokubona ukufunda inkcazo enhle yelali kwi-Arundhati Roy's Booker-winning Prize inoveli, "UThixo wezinto ezincinci". Ime phakathi kweekhilomitha ezili-10 ukusuka eKumarakom, iAymanam ilali encinci eneLake Vembanad ngasekhohlo kunye noMlambo iMeenachil oqukuqela ukusuka ekunene kwayo. Ilali isikelelwe kakhulu ngentabalala yendalo, phantse i-2/3rd yomhlaba igqunywe ngamasimi epaddy (irayisi). Njengakuyo nayiphi na idolophana yaseKuttanad, amasimi e-paddy alala ngaphantsi kolwandle.
I-Riverdale Villa ibekwe kumbindi weefama zezolimo, amachibi okuloba, iiprawns kunye neendawo zokuqandusela amanzi amatsha; yindlu evulekileyo nokukhanya, eyonwatyiswa ziintaka, igutyungelwe yimithi nebethwa yimpepho epholileyo evela kumanzi angasemva.
Umbuki zindwendwe ngu- Johnson
Ekubeni intsapho yethu ihlala kwindawo, siya kuvuya ukwabelana ngexesha lethu kunye neendwendwe, ukubonisa, ukuthetha malunga nenkcubeko, ukutya kunye nemibhiyozo yobomi bemihla ngemihla.